नेप्सेमा ‘शार्प ट्रेण्ड रिभर्सल’, ९५.५२ अंकको वृद्धि ! - Laltin Media
Home»सेयर बजार»नेप्सेमा ‘शार्प ट्रेण्ड रिभर्सल’, ९५.५२ अंकको वृद्धि !
नेप्सेमा ‘शार्प ट्रेण्ड रिभर्सल’, ९५.५२ अंकको वृद्धि !
By लाल्टिन डट कम April 24, 2022 Updated: April 24, 2022 No Comments3 Mins Read
आज आइतबार ९५.५२ अंकले बढेर ४.११ % वृद्धिको साथ नेप्से परिसूचक २४२०.९६ अंकमा बन्द भएको छ। कारोबार भएका २३८ कम्पनीमध्ये १९३ कम्पनी उकालो लागेका छन्, १ कम्पनी ओरालो लागेको छ र १ कम्पनी स्थिर रहेको छ।
कारोबार भएका तेह्र उप-समुहहरुमध्ये सबै उप-समुहको सेयर मूल्य उकालो लागेका छन्।
बजार पुँजीकरण बढेर ३४ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको छ।
NEPSE Daily Update: April 24, 2022
आज बोलिन्जर ब्याण्डको अपर र लोवर ब्याण्डको अन्तर घटेको विश्लेषणले देखाउँछ (आजको फरकः३४५) जसले बजारमा भोलाटाइलिटी घटेको इङ्गित गर्दछ। बजार आज लोवर र अपर ब्याण्डको बीचतिर २४२० मा बन्द भएको छ। आज बजारमा खरिद चाप बढेको देखिन्छ ।
मुभिङ एभरेज कन्भर्जेन्स डाइभर्जेन्स विश्लेषणले एमएसिडि लाइन जिरो लाइन भन्दा तल -७० मा आएको देखाउँछ। हिस्टोग्राम बढेर नेगेटिभ २ मा आएको छ। एमएसिडी लाइनले माथिबाट सिग्नल लाइनलाई क्रस गरेर तल तिर निरन्तर गईरहेको थियो तर आज केही माथि चढ्न खोजेको देखिएको छ। सिग्नल लाइन जिरो लाइन भन्दा तल -६८ मा आएको छ। समग्र मुभिङ्ग एभरेजलाई हेर्दा बजारमा आज खरिद बढेको देखिन्छ।
डाइरेक्सनल मुभमेन्ट इन्डिकेटरले आज +१४ डिएमआई लाइन माथितिर फर्किएको छ भने -१४ डिएमआई तल फर्किएको देखाउँछ। सिग्नल लाइन +१४डिएमआई लाइनलाई क्रस गरेर माथि बाट तल तिर फर्किएको छ जसले ‘ट्रेन्ड रिभर्स’ हुन थालेको जनाउँछ। -१४ डिएमआई लाईन तल तिर गइरहेको देखिन्छ जसले बिक्री घटेको बुझ्न सकिन्छ।
आज नेप्सेले बुलिश क्यान्डल बनाएको छ जसले बजारमा व्यापक खरिद बढेको देखाउँछ।
क्युमुलेटिभ एडी लाइन -४४६७ देखि बढेर -४२७५ मा आएको छ। नेप्सेको कुल भोल्युम ४५३५२६८ रहेको छ जुन २१ दिन मुभिङ एभरेज भोल्युम(३७८४४७१) को १२० प्रतिशत देखिएको छ।
नेप्से आज लोवर ब्याण्ड र अपर ब्याण्डको बीच तिर २४२० मा क्लोज भएको छ। एमएसिडी लाइन जिरो लाइन भन्दा तल -७० मा आएको छ र सिग्नल लाईन पनि जिरो लाइन तल -६८ मा देखिएको छ भने हिस्टोग्राम नेगेटिभ बढेर २ मा पुगेको छ जसले बजारमा बिक्री घटेको देखिन्छ।
-१४ डिएमआई लाइन तल फर्किएको छ भने +१४ डिएमआई लाईन माथि तिर फर्किएको देखिन्छ र एमएसिडी लाइनले माथिबाट सिग्नल लाइनलाइ क्रस गरेर निरन्तर तल गईरहेको थियो तर आज केहि माथि जान खोजेको देखिएको छ जसले ट्रेन्ड रिभर्स हुन थालेको जनाउँछ। आज बजारमा खरिदकर्ताको मोमेन्टम बढेको देखिन्छ। आरएसआइ आज २८.८ बाट बढेर ४३.५ मा आएको छ आरएसआइको मोमेन्टम बढेको जनाउँछ ।
नेप्सेको आगामी दिनको नजिकको सपोर्ट २३३० को एरिया रहेको देखिन्छ नेप्सेको नजिकको अवरोध २४६० को एरिया रहेको देखिन्छ।